मलाई एकदिनको लागि अर्थमन्त्री बनाउनुस्, देशको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्छु ! : ज्ञानेन्द्र शाही – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/मलाई एकदिनको लागि अर्थमन्त्री बनाउनुस्, देशको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्छु ! : ज्ञानेन्द्र शाही
मलाई एकदिनको लागि अर्थमन्त्री बनाउनुस्, देशको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्छु ! : ज्ञानेन्द्र शाही
काठमाडौ । नागरिक अभियन्ताको रुपमा चिनिएका ज्ञानेन्द्र शाहीले आफुलाई एकदिनको लागि अर्थमन्त्री बनाए देशको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्न सक्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले काम गर्ने भन्दा योजना बनाउने हो जसले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्छ ।उनको सो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । शाहीका पक्ष र विपक्षमा रहेर मानिसहरुले उक्त अभिव्यक्तिप्रति आ आफ्नो बिचार राखेका छन् ।
केहिदिन अघि राहत वितरण गर्दै गर्दा पक्राउ परेका ज्ञानेन्द्र शाही अहिले रिहा भएका छन् ।
आफुलाई गृहमन्त्रीले बदलाको भावना लिएर पक्राउ गर्ने आदेश दिएको सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन् ।
गृहमन्त्री विरुद्द आफु बोलेको कारण अहिले राहत वितरण गर्दैगर्दा पक्राउ गरि तनाव दिएको आरोप लाएका छन् । “अब राहत बाँढे फेरि पक्राउ गर्ने भनेपछि अहिले म राहत बाढ्न छोडेको छु । सरकारलाई सबैभन्दा पहिला मैले नै सहयोग गरेको हुँ तर मलाई नै पक्राउ गर्दा दुख लागेको छ ।” शाहीले दुखेसो पोखे ।
ज्ञानेन्द्र शाहीले भने, “मलाई एकदिनको लागि मात्र अर्थमन्त्री बनाए देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सक्छु । अर्थमन्त्रीको काम भनेको काम गर्ने होईन योजना बनाउने हो । म केहि काम गर्दिन एकदिनमा यस्तो योजना बनाउछु जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्छ ।”
पर्सागढीका ६ वटै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण
अब काठमाडौं आउन र बाहिर जान पाइने : यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
बाँकेको कोहलपुरमा ३ जनालाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि
झन्डा जला उने प्रती रबिलामिछानेको कडा अबि ब्क्ती …. पुरा पढनुहोस